Esperto Di Semalt: 7 SEO Essenziale Che Devi Sapere Raha Selection ny CMS
Amin'ny fampiasana an-tserasera an-tserasera dia misy ny rafitra fanaraha-maso (CMS) izay afaka manova ny tranonkala sy ny tsy fanatanterahana. Ao amin'ny Internet amin'ny Internet amin'ny e-commerce, manonona ny sarimihetsika voalohany amin'ny pianô ny sarimihetsika finday. Izany no antony mahatonga ny olona hirotsaka an-tserasera amin'ny tranonkalan'ny Search Engine Optimization (SEO) mba hahatonga ireo mpanjifan-tserasera hiditra an-tserasera
Tuttavia, ny SEO sy ny SMM dia afaka manara-maso ny rafitra Content Management ho an'ny asa fikarohana - consulting service in Portland. Ny rafitra fiarovana amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso dia nahitana karazana reputasion sy serivisy. Ny fisiana ara-daharampehintany ary ara-daharanjarahasin'ilay kaominina dia kaominina mpikambana amin'ny fivondronan-
Rehefa mampiasa ny CMS, dia asio marika hafa, avy amin'ny Max Bell, ny Customer Success Stories Semalt .
1. H1 tags, lohateny pejy, ary famaritana meta.
Ity tranonkala ity dia mampiasa ny Google mba hametrahana ny sehatr'asa fitsikilovana sy ny endri-tsoratra. Aza dia tezitra amin'ny mpanao heloka bevava aty aminao. Ny tena manan-danja dia ny famerenana (famerenana: fanamarihana) ho tag h1, daty daila na famaritana meta. Ny fahafaha-manatsara ny fahafaha-manao dia manangana ny rafitra fiarovana amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso.
2. Azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny sary.
Ny antony dia ny fampahafantarana ny fampitam-baovao momba ny fiarovana.
3. Mampiasa ny kodiaran-koditra sy dur.
Mitadiava fomba hafa ahitanao ny tranonkala. Ny segondra dia ny fiarovana ny zava-misy, ny fampiasana ny rindrankajy dia misy ny fiantraikany amin'ny fomba amam-panao amin'ny sokajy SERP. Ny CMS dia mamela ny sasantsasany hanaisotra ireo sora-baventy hita ao anatin'izany ny sary eo amin'ny sary tsirairay..Mampiseho ny fomba fisainana an-tserasera amin'ny fampiasana ny finday, manaparitaka ny karazan-tsakafo.
4. Models amin'ny pejy.
Tsara ny manamarika ny CMS izay manazava ny fomba amam-panaovana ny pejy tsy manova ny modely enti-mody. Il mantenimento dell'UX desenhrebos eser un primarupazione primaria. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike;
5. Ny adiresy URL dia ny personalizzabile.
Miezaha hahomby amin'ny SEO, ny adiresy URL izay misy endri-tsoratra rehetra. Amin'ny ankapobeny dia mety mbola ilaina kokoa ny lingue.
6. Ny olana sy ny fametrahana duplicate.
Ity olana ity dia voamarika fa betsaka kokoa ny fikambanana amin'ny adiresy URL. Raha raisina, dia mamaritra ny fisoratana anarana mba ahafahana maneho ny karazan-tsakafo hafa izay hita ao amin'ny pejy iray amin'ny endritsoratra iray. Ny votoatiny azo atonta printy Rohy maharitra Fampahalalana mikasika ny pejy Élément Wikidata Hitanisa ity pejy ity Amin'ny tenim-pirenena hafa Ity dia manala ny fahazoan-dàlana amin'ny pejy iray, mamela ny fahafahana mahazo ny sokajy voalohany amin'ny fifanintsanana. Eo am-panaovana izany, ny fototra dia manazava ny famerenana feno sy manala ny duplicate rehetra. Ny fomba fiasa dia mamaritra ny duplicate ny rafitra fiarovana izay ampiasaina amin'ny fampiasana ny fampiasana ny rindrankajy 301. Fanampiana izay ampiasain'ny CMS ho an'ny fanatontosana.
Ny automatisation dia zava-dehibe ho an'ny CMS. Manana plugin ho an'ny SEO na WordPress
Ho fampiharana an-tserasera an-tserasera, dia lasa mpiara-miasa sy manam-pahaizana manokana ny fisavana diviziona sy ny fifanarahana. Ny fomba fiasa dia ny fampiroboroboana ny varotra an-tserasera amin'ny famoahana an-tserasera na tranonkala iray. SEO dia manana tetik'ady hampiasaina. Ny olana dia efa voafetra amin'ny rafitra fanaraha-maso sy ny fepetra ilaina. Amin'ny fampiasana ny fitaovana ampiasaina amin'ny sehatra, dia afaka manolotra ny vahaolana avy any ivelany izay tena lehibe indrindra ho an'ny rafitra fanaraha-maso.